Ngwọta: Ime Mgbasa Ọha na Ọrụ maka ụdị | Martech Zone
Curalate: Ime Social Curation Arụ Ọrụ maka Workdị
Denye bụ ikpo okwu nke na-emetụta onyonyo dị elu nchịkọta na mkparịta ụka mgbasa ozi na-elekọta mmadụ iji nye gị nghọta siri ike maka Instagram na Pinterest Ha na-enyere ụdị aka ike ka akụkọ ha sie ike ma gbanwee atụdo, mmasị, hashtags na ndị na-eso ụzọ n'ime ego ha ga enweta.
Atụmatụ nke Curalate
Analytics - Curalate mepụtara onye na-achị nke na-atụ ihe onyonyo gị. A na-ekekọrịta ngwaahịa ndị kachasị elu na weebụsaịtị gị, mkpọ na mbadamba ndị kachasị ewu ewu na akaụntụ Pinterest gị, nyocha okporo ụzọ dabere na onyonyo, yana ikpughe ROI site na Pinterest. Gụnyere usoro maka akaụntụ Instagram, hashtags, na mkpọsa na nyocha na-enweghị atụ nke asọmpi gị.
Njikọ Ndị Ahịa - Fuel mkparịta ụka banyere gị ika. Zaghachi pin, repins, na-ekwu banyere gị ihe oyiyi. Zaghachi Tweets banyere ọdịnaya gị sitere na Pinterest. Soro ndị na-akwado gị na ndị na-akwado gị. Nyochaa kpọmkwem okwu na-anọchi anya mmetụta ma ọ bụ aha aha.
n'ọkwá - nweta ike nkwalite ndị ahịa kachasị dị na Pinterest. Kwado asọmpi gị ibi ebe ọ bụla na ebe niile - weebụsaịtị gị, blọọgụ na Facebook. Nyochaa ndị nabatara, mmụba, uto ahịhịa, onyonyo kachasị elu, na ego ha nwetara - ha niile sitere na Curalate dashboard
Njikọ aka saịtị - Jiri ọdịnaya ndị na - eri ihe na - esokarị na Pinterest na Instagram iji kpata ndị ọbịa na saịtị gị. Iji Curalate, ị nwere ike ịchọpụta ọdịnaya nke ika gị na-egosipụta ma gosipụta ọdịnaya ahụ na ụzọ.
Mee ka ndị ahịa chọpụta ngwaahịa dị ọkụ ma mee ka ha gụọ ọdịnaya dị jụụ. Ha niile sitere na otu ikpo okwu.
Tags: itinye aka n'jigwọọhashtaginstagramPinterestpinterest zoonkwalitenjikọ aka saịtịelu di ala
Mass Ahịa na nkeonwe
Ihe kpatara azụmahịa gị ji achọ ngwa
Mee 9, 2013 na 8: 49 AM
Daalụ maka ịkekọrịta Doug! Akwa post !!